Anthony Martial Oo Xaqiijiyay Inuu Doonayo Ka Dhaqaaqista Kooxda Manchester United – Gool FM
Anthony Martial Oo Xaqiijiyay Inuu Doonayo Ka Dhaqaaqista Kooxda Manchester United
(Man United) 03 May 2018. Sida ay xaqiijinayaan warbaahinta dalka England laacibka xulka qaranka France ee Anthony Martial ayaa doonaya inuu isaga dhaqaaqo garoonka Old Trafford, marka uu dib u formo suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Wargeyska “Express” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Anthony Martial uu ku war galiyay wakiilkiisa inuu raadiyo koox cusub laga bilaawo xili ciyaareedka cusub, isagoo sheegay inuusan sii joogi doonin kooxda Manchester United.
Martial ayaanan kasoo muuqan safka kooxda Manchester United kulamo badan ee xili ciyaareedkan ah, sababa la xidhiidha go’aanka tababare Jose Mourinho, waana sababta uu careesan yahay xidiga reer France. Maadaama uu waayay booskiisa Red Devils.
Laacibka reer France ayaa weydiistay maamulka kooxda Manchester United inay ka fasaxaan garoonka Old Trafford bishii January ee lasoo dhaafay, kadib markii ay wada hadalo la furteen laacibkii hore kooxda Arsenal Alexis Sanchez.
Qiimaha Tikidhada kulanka lagu sagootinayo tababare Arsene Wenger oo aad u qaaliyoobay
Shaxda rasmiga ah ee kulanka Atletico Madrid vs Arsenal (Costa iyo Griezmann oo hogaaminaya weerarka Atletico)